तीस वर्षमा गरेका गल्ति सच्याएर संगठनको योगदानप्रति सबैलाई नतमस्तक बनाउनेछौं – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
२४ जेष्ठ २०७७, शनिबार नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, लक्ष्मण शर्मा
नेपालकै जेठो शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यही जेठ १६, १७ र १८ मा सम्पन्न महाधिवेशनले संगठनको अध्यक्षमा लक्ष्मण शर्मालाई निर्वाचित गरेको छ । धादिङ जिल्लास्थित सत्यवती माविका प्रधानाध्यापक रहनुभएका शर्मा संगठनको यसअघि महासचिव हुनुहुन्थ्यो । सिकाइमा सूचना प्रविधिको अभियन्ताका रुपमा चिनिनुहुने शर्मा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक आन्दोलन तथा ट्रेड युनियन आन्दोलनबारे जानकार मानिनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, संगठनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शर्मासँग रोशन क्षेत्री गाउँलेले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । कस्तो लागिरहेको छ ?
पहिलो कुरा त हाम्रो ध्येय भनेको आम शिक्षक एकता, ०३६ सालमा हामीले सबै शिक्षकहरुको एकीकृत अभियानको नेतृत्व गर्यौं र ०४६ सालसम्ममा आइपुग्दासम्म पनि एउटै शिक्षक संगठन थियो, त्यसको नेतृत्व हामीले गरिरहेका थियौं । र, शिक्षक एकता नै पहिलो काम भनेको अहिले हाम्रो बहु–युनियनको जुन अवस्था छ, त्यसलाई हामीले महासंघ बनाएर डाइलग बे्रक गरेका छौं, छलफल र बहस हुन थालेको छ । त्यसले गर्दा हामी धेरै व्यवहारिक र वैचारिक हिसाबले नजिक आइरहेका छौं । त्यसकारण कम्तिमा लाइक म्यान्डेट संस्थाहरुको बीचमा एउटै शिक्षक संगठन बनाउने अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ यो कार्यकालमा भन्ने लागेको छ । दोस्रो कुरा, नेपालको संविधान लागू भएपछि शिक्षामा स्थानीय तहको दायित्व भनेर आयो । यो म्यानेजमेन्टचाहिँ स्थानीय तहमा पठाउने कुराले शिक्षकको व्यवस्थापन कस्तो हुने ? शिक्षकको ट्रेड युनियन हक–अधिकारहरु संविधानतः जुन मौलिक हकको रुपमा कायम गरिएको छ, त्यसलाई कसरी कार्यक्रमिक ढंगले अगाडि बढाउने ? ऐन बनाउनुपर्यो, अगाडि लैजानु पर्यो, यी पक्षहरु दोस्रो दायित्व हो जस्तो लाग्छ । स्थानीय तहमा हामीले बनाएका कमिटीहरुलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने, क्यापासिटेट गर्नुपर्ने, उहाँहरुको लिडरसिपलाई प्रमोट गर्नुपर्ने र स्थानीय रुपमै कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न रिलायवल एजेन्सीको रुपमा विकास गर्नु यो मेरो दोस्रो काम हो जस्तो लाग्छ । र, तेस्रो काम भनेको अस्थायी शिक्षकको चारचोटीको स्थायी परीक्षा स्थगित भयो र ती २७ हजार अस्थायी शिक्षकहरु, राहतका शिक्षकहरु, इसीडी/पीसीएफका शिक्षकहरु, उच्च माविका साथीहरु, विद्यालय कर्मचारीहरुका विभिन्न आन्दोलनले निश्चित मुद्दाहरु स्थापित गरेको छ, ती कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी छौं । सरकार ठूलो उद्देश्य राखेर निर्वाचित भएर आएको छ । यो बेलामा हाम्रा हिजोका सरकारहरुले गरेका सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने र सहजीकरण गर्ने कामचाहिँ मेरो तेस्रो महत्वपूर्ण काम हो जस्तो लाग्छ ।
एउटा कुराचाहिँ पञ्चायतलमा शिक्षक संगठनले एकदम प्रोफेसनल एजेण्डा उठाएको हो । हाम्रो शिक्षक स्थायी हुनुपर्यो, हाम्रो प्रतिनिधि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हुनुपर्यो, हामीलाई ननटिचिङ स्टाफ पनि चाहियो स्कूलमा । विनाकारण अवकाश प्राप्त शिक्षकहरुको पुनर्बहाली हुनुपर्ने जस्ता एजेण्डा नै लिएर गएको हो । राजनीतिक कुरा थिएन । तर, राजनीतिक कारणले गाउँका फटाहा पञ्चहरुले निकालिदिएका शिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गराउने कुरामा राज्यले हाम्रो कुरा नसुनी ती गलत कुराहरुको प्रोटेक्सन गरेपछि राज्य विपक्षमा रहेछ भन्ने लागेपछि र त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरुले साथ दिएपछि यसमा राजनीति भित्रियो । तत्कालीन शिक्षक संगठनको भूमिका एउटा देशको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई सपोर्ट गर्ने, अर्को शिक्षा विकासका लागि शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने भयो । हेर्दा पोलिटिकल देखिएपनि ननपोलिटिकल कुराहरु उठाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि हाम्रो पेशामा महिलाहरु हुनुहुन्छ र अहिले पनि लैंगिक हिसाबले पीडित हुुनुहुन्छ । इसीडीमा ३० हजार महिलाहरु न्यूनतमभन्दा पनि तलको ज्यालामा काम गरिरहनुभएको छ । राहतमा त्यस्तै छ । प्राइभेट सेक्टरमा लाखौं शिक्षकहरु काम गरिरहनुभएको सरकारले भनेको जति पनि पैसा पाइरहनुभएको छैन । सरकारको अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन । यी कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो भने जाँदा कसैले राजनीति गरिस् भन्छ भने यस्तो खालकोे राजनीति चाहिँ गर्नैपर्छ । र त्यसको लागि शक्ति आर्जन पनि गर्नुपर्छ । भलो चिताएर मात्रै भलो हुँदोरहेनछ । त्यसकारण तपाईहरुले राजनीति गर्नुभयो छोडिदिनुस भन्छ भने यदि कसैले यी कुराहरुको सम्बोधन गरोस्, हामी छाडिदिन्छौं । जुन दिन सत्तापक्षका सांसदहरुले ‘तपाईँहरुले ट्रेड युनियनको चिन्ता नलिनुस्, कक्षाकोठाभित्र राम्रो पढाइदिनुस् । तपाईँहरु बालअधिकारको पक्षमा लाग्नुस्, तपाईँहरुको अधिकारको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं’ भनेर संसदमा बोल्न थाल्नुहुन्छ, त्यो दिन हामी सबै छाडेर कक्षाकोठामा केन्द्रित हुन्छौं । हाम्रा लागि कोही नबोलेकाले हामी बोल्नु परेको हो ।
शिक्षकको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा भर्तिदेखिकै कुरा आउँछ । हामी संवैधानिक शिक्षक आयोगको पक्षमा छौं । लोकसेवा आयोगमै एउटा शाखा राखेर काम गर्न पनि सकिन्छ । हालसम्मका शिक्षाका आयोग विभिन्न राजनीतिक दल, व्यक्तिको स्वार्थमा भए । लोकसेवा आयोगलाई कहिल्यै बाधा भएन । द्वन्द्वकालमा पनि काम गर्यो, संकटकालमा पनि काम गर्यो । शिक्षक कमजोर भयो भने शिक्षकलाई गाली गर्ने होइन, लोकतन्त्रमा सिस्टमतिर फर्केर हेर्ने हो । हामीले कस्ता मान्छे कसरी भर्ति गर्यौं ? अहिले के गरिरहेका छौं ? हिजो लटका लट पार्टी कार्यालयबाट लिस्ट पठाएर शिक्षकमा भर्ति गरेपछि अहिले शिक्षकले राजनीति गरे भन्न मिल्छ ? राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरेपछि गर्दैनन् त ? आयोगबाट ल्याउनु पर्यो नि त । अहिलेको आयोग पनि शिक्षक आन्दोलनका कारण माग पूरा गर्न स्थापना भएको हो, भनेजस्तो नभएपनि । हामीले राम्रा र उत्कृष्ट जनशक्तिको आकर्षणको केन्द्र शिक्षणलाई बनाउनै सकिएको छैन । अन्य सेवाभन्दा बढी सुविधा भए राम्रा जनशक्ति आउँथे । यहाँ मावि तहका शिक्षक पेशा छाडेर सुब्बामा नाम निकालेर जाने संख्या धेरै छ । कस्तो मान्छे भित्र्याउँछौं, आएपछि कस्तो तालिम दिन्छौं, कस्तो प्रोत्साहन गछौं, भविष्यको सुरक्षा कसरी गरेका छौं ? त्यसले गुणस्तर निर्धारण गर्छ भन्छ सिद्धान्तले । यी सबैमा समस्या छ । केगरी राम्रो गर्ने नसोच्ने, यिनले राम्रो गरेनन् मात्रै भनेर केही हुँदैन ।
शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार वास्तवमा के हो ?
औद्योगिक क्रान्ति सँगसँगै भिन्नैखालको जनशक्ति चाहिएर सार्वजनिक विद्यालयहरु खुले । उद्योगका मालिकहरुले सरकारलाई कर तिरे र त्यो करवापत् राज्यले विद्यालय खोलिदियो । यस अगाडि शिक्षा धार्मिक कार्य मात्रै थियो । गुरु–पुरोहितले धर्म पढाएर नहुने भएपछि शिक्षकहरु भर्ति गरिए । अनि त्यो धार्मिक कार्यबाट पेशा कर्म हुन थाल्यो । म भन्छु शिक्षक गुरु होइनन्, पेशाकर्मी हुन् । मरेपछि स्वर्ग जान काम गरेकै होइन । परिवार पाल्न पेशा गरेका हुन् । कामदार, पेशाकर्मी हुन् । मजदूरहरुले अधिकारको आन्दोलन देखेपछि शिक्षकहरुले पनि अधिकारको आन्दोलन गरेको देखिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा । हाम्रामा त्यस्तो होइन । न हामी उदारवादको महशूस गर्न पायौं न औधोगिक क्रान्तिको । संसारका ठूला–ठूला संगठन मिलेर एजुकेशन इन्टरनेशनल बन्ने बेला हामी चार्टर मेम्बर हौं । हाम्रो ट्रेड युनियन आन्दोलन अन्यभन्दा कम छैन । ट्रेड युनियनमा संगठितको हिसाबले हाम्रो देश राम्रोमा पर्छ । लगभग सबै संगठित छन्, कुनै न कुनै रुपमा । यसले पाएका उपलब्धि र बसालेका प्रणालीहरुको सूची राम्रो छ ।
शिक्षकलाई कसरी सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने नेपालको मात्रै होइन, संसारकै एजेण्डा हो । कक्षाकोठामा शिक्षकको डेलिभरीमा प्रविधिलाई कसरी जोड्ने ? बालबालिका, हाम्रा घर सूचना प्रविधिमैत्री वा डिजिटल भइसके । हाम्रा कक्षाकोठा पुरानै छ । भिडियोमा चलिरहेको हेर्ने रहरलाई कालोपाटीमा चकले चित्र बनाएर रुचिपूर्ण र उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने क्षमता राख्दैन । बदलिँदो समयमा शिक्षकहरुलाई कसरी बदल्ने त भन्दा संसारमा विभिन्न मोडलहरु छन् । विद्यालयलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउनुको एउटा पार्ट शिक्षक तयारी पनि हो । शिक्षकले प्रविधि जानेन भनेर शिक्षकलाई अपमान गर्ने एजेण्डा भने बनाउन पाइदैन । शिक्षक बन्ने बेला त्यो आउनै पर्दैनथ्यो । कि शिक्षकलाई आफै सिक त्यसबापत् सर्पोट गर्छौं, थप सुविधा दिन्छौं भन्नुपर्यो । कि राज्यले कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो । सूचना प्रविधि जान्दैमा सबै कुरा हुन्छ भन्ने पनि होइन । शिक्षकका आवश्यक ८ वटा सक्षमताहरुमध्ये एउटा मात्रै हो यो । हाम्रोमा लगानी नगरी सित्तैमा गुणस्तर खोजेर नपाइएको हो ।
शिक्षक संगठन अबको तीन वर्षपछि देशकै ठूलो शिक्षक संगठन बन्छ । शिक्षक संगठनले के भन्छ भनेर सरकारलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ । स्थानीय तहमा हरेकमा फरक–फरक अभ्यास देखिन्छ । त्यसलाई एउटै बाटोमा अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । संगठनहरुको पेशागत र ट्रेड युनियनको सोचाइ माथि पुग्नेछ । हामीले विगत २०/३० वर्षमा गरेका गल्ति सच्याएर संगठनको योगदानप्रति सबै नतमस्तक हुने अवस्था सिर्जना गर्छौं ।
२०७५ जेष्ठ २४ गते ०९:१९मा प्रकाशित